Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya Oo Ka Dagay Qadar - Waadinews | Somali News and Entertainments
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Oo Ka Dagay Qadar
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayay ayaa maanta gaadhay magaalada Doxa ee dalka Qadar, kaddib markii uu martiqaad ka helay Amiirka Qadar. Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya iyo weftigiisa ayaa waxaa ku soo dhaweeyey gegida diyaaradaha ee Xamad, Wasiirka isgaadhsiinta Qadar Jassim Bin Sayf, safiirka Qadar ee Fadhigiisu yahay Adis Ababa iyo Safiirka Itoobiya u jooga Magaalada Doxa.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Amiirka Qadar Sheekh Tamiim Bin Hamad al-Thani ayaa lagu wadaa in wada hadalo ku yeeshaan qasriga Madaxtooyada. Wada hadalada labada dhinac ayaa diiradda lagu saari doonaa xidhiidhka labada dal, iskaashiga iyo xaaladaha ka jira Gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan is bedelka uu hormuudka ka yahay Abiy Ahmed.
Tartanka Juquraafiga Siyaasadda ee Gobolka Geeska Afrika ayaa u muuqda mid sii xoogeysanaya, marka loo eego loolanka dalalka Khaliijka ka dhaxeeya, sida Sacuudiga, Imaaraadka oo dhinac ah iyo Qadar. Qatar ayaa xilligan galaan-gal xooggan ku leh arrimaha Gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan dowladda Soomaaliya oo ay xulufo la tahay, isla markaana siiso taageero dhaqaale.
Related Topics:Abiy AxmedDohaItoobiyaQadar